Vietnam Visa guidance for citizens of Zimbabwe
You are here: Home > Vietnam Visa guide > Vietnam Visa guide for Zimbabwe
Latest information and guidance Vietnam visa for the citizens of Zimbabwe including fee, procedures, details and instructions...(Read more...)
Can Zimbabwean citizens get Vietnam visa exemption?
According to the temporary Vietnam Immigration law, ordinary passport holders of Zimbabwean cannot have Vietnam visa exemption unless they get married to a Vietnamese passport holder. ...(Read more...)
How to get pre-approved Vietnam visa for Zimbabwean citizens
Zimbabwean citizens should apply for pre-approved Vietnam Visa before entering the country, and then get visa stamped when they arrive at Vietnam airport....(Read more...)
From Zimbabwe, foreigners planning to enter Vietnam can apply for Vietnam visa at Embassy of Vietnam in Zimbabwe at Rua Comandate Nzazi 66/68, PO Box 75B, Luanda, Angola, or simply submit the online visa application to get visa approval letter (by the Immigration Department of Vietnam) and get Vietnam visa on arrival at airport....(Read more...)
Vietnam visa on arrival service for Zimbabwean citizens
Question If Zimbabwean passenger wants to get a visa on arrival, are your agents able to assist? ...(Read more...)
Can Zimbabwean enter Vietnam?...(Read more...)
The procedures of Vietnam Visa extension for Zimbabwean
Zimbabwean residing in Vietnam can apply for the extension of visa with the residency time from one month to one year. ...(Read more...)
How to get Vietnam visa approval letter for Zimbabwean citizens
Zimbabwean citizens wishing to enter Vietnam are required to apply for Vietnam visa and get visa or visa approval letter issued by the Immigration Department of Vietnam before departure...(Read more...)
Is Vietnam visa required for Zimbabwean?
According to updated news on Vietnam Immigration for Zimbabwean citizens from Vietnam Immigration Department, all Zimbabwean citizens are required to apply for Vietnam visa prior to departure to Vietnam....(Read more...)
Can Zimbabwe citizens apply for Vietnam business visa
The recent changes in Vietnam Immigration policy indicates that Zimbabwe citizens entering Vietnam with tourist or business purpose are required to be guaranteed by a Vietnamese company or a visa agent....(Read more...)